रेविजको भ्याक्सिन र काठमाण्डौका अस्पतालहरुको अवस्था
वैकुण्ठ ढकाल शनिबार, माघ १८, २०७६ मा प्रकाशित
दिनभरको थकान मार्नको लागि भनेर आरामका लागि ओछ्यानमा पल्टियो । घ्याङ घ्याङ ... नजिकै आएर कुकुर घुकेको घुक्यै गरेर निदाउनै दिँदैन । कहिले मस्तले निदाउँदा त्यही कुकुरहरुले घुकेर निन्द्रा नै बिथोदिन्छ ।
घ्याङघ्याङ यो आवाजले मलाई एकाएकै घरको याद दिलाइदियो ।
त्यो दिन फोन छोराले उठायो–
‘बाबा, एउटा कुरा थाहा छ ? घरमै एउटा दुर्घटना भयो नि ?’
‘के भयो, छोरा, के दुर्घटना ?’
‘मामुलाई कुकुरले टोक्यो नि ?’
हतार हतार फोन मामुलाई दिन भनेंं, सबै कुरा बुझें । हो, रहेछ । कुकुरले टोकेको मात्रै हैन, घाउ नै हुने गरी टोकेको रहेछ । त्यो कुकुरले टोक्ने उनी पहिलो व्यक्ति होइनन, सायद चौथो पाँचौ । यस्तै थिइन । कुकुरले टोक्यो, दुई चार दिनमा घाउ निको हुन्छ, भनेर चुप लागेर बस्ने कुरा भएन ।
रेविजबिरुद्धको खोप लगाउने कुरा भयो । तर कहाँ ? थाहानगरबाट काठमाडौं आउन समस्या हैन, तर एक पटक आएर हुने कुरा थिएन । तीन पटक खोप लगाउनु, निश्चित दिनको अन्तरमा, यो चाहिं अलि अव्यावहारिक थियो । स्कूल पढाउन जानु पर्ने, विदाको कुरा थियो, त्यहाँमाथि सानो छोरो बोकेर आउजाउ गर्नु । कठिन थियो ।
थाहानगरमै रहेको निजी क्लिनिङ उपलब्ध रहेछ । एक मात्राको साढे छ सयदेखि सात सय रुपैंयासम्म लिने रहेछ ।
काठमाडौंको टेकू अस्पतालमा सरकारले निःशुल्क उपलब्ध गराउने खोप ७० किलोमिटर टाढा पुग्दा सात सय रुपैंया पर्छ । यहाँ मूल्यको कुरा भन्दा पगि कमसे कम खोप त लगाउन पाइयो भनेर चित्त बुझाउने कि ? नगरभित्र रहेका सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरुले कि उपलब्ध गराउँदैनन भनेर प्रश्न गर्ने ?
रेबिज बिरुद्धको खोपको मात्रै हैन, अन्य खोपहरुको पनि कुरा आउंछ, जुन दिन लगाउनु पर्ने हो, त्यही दिन खोप लगाउन पाइदैन । थाहा नगरको कुरा गर्दा हरेक महिनाको ८ गते खोप लगाइन्छ । ४५ दिनमा लगाउनु पर्ने खोप ठ्याक्कै दिन पुगेकै दिन लगाउन सकिन्न । दुई चार दिन तलमाथि हुँदा ‘खासै’ फरक पदैन भनिन्छ । यथार्थ के हो विज्ञहरु नै जानून, भनूनन । खोपको चक्र शिशु जन्मेको केही दिनपछि शुरु भएर नौ महिना पूरा नहुँदासम्म चल्छ । हुन त गर्भवती आमा र गर्भमा रहेको बच्चाको सुरक्षाको लागि भनेर त्यो समयमा पनि कुनै कुनै खोप लगाउने गरिन्छ ।
खोपको कुरा पछि अब अर्को उपचारको कुरा जोडौं, केही वर्ष अघि आमा कोल्ड डायरियाको थला नै पर्नु भयो । त्यो बेलामा थाहानगरमा उपचार र परीक्षण गर्दा निको हुनु भएन, एम्बुलेन्समा चढाएर काठमाडौं ल्याइयो । सिधै शुक्रराज सरुवा रोग अस्पताल (टेकू अस्पताल) ल्याइयो । सायद दोस्रो दिन ठीकठाक भएर डिस्चार्ज हुनु भयो ।
म यहाँबाट दाइ र एम्बुलेन्स चालकलाई टेकु लैजानु पर्छ भनिरहेको थिएँ । एम्बुलेन्स चालक दुविधामा रहेछन । अस्पतालमा पुगेर आमालाई इमन्जेन्सी हुँदै वाडमा पु¥याउँदा चालक मेरो कान नजिकै आएर फुसफुसाए । सर्पले टोकेको विरामी ल्याउने अस्पताल किन ल्याएको ? मैले टेकू अस्पतालको बारेमा बेलीबिस्तार लगाइरहँदा चालक दुविधामै थिए । ती चालक राति अवेर एम्बुलेन्स लिएर फर्कंदा पनि गलत अस्पतालमा विरामी छाडेर आएँ भन्ने भावमा थिए । एम्बुलेन्स चालक र पंक्तिकारको घर नजिकै भएकाले भेटघाट नहुने कुरै भएन । भेट भयो आमा चाँडै नै निको भएर घर फर्कनु भएको थियो । मसँग भेट हुँदा ती चालकले अस्पतालमा कति खर्च भयो भनेर सोधे मैले पनि तत्कालै जवाफ दिएँ ‘एम्बुलेन्स भाडाभन्दा निकै कम’। चालक मेरो अनुहार हेरेको हेर्यै भए, मेरो आशय आमाको स्वास्थ्यको पैसासँग तुलना हुँदैन भन्ने हो । आमाको मात्रै हैन, कुनै पनि मानिसको स्वास्थ्यको तुलना पैसासँग हुँदैन ।
जुन दिन आमालाई अस्पताल लगियो, त्यही रात महोत्तरीबाट एउटा एम्बुलेन्सले सुत्केरी हुन नसकेको भनेर परोपकार प्रसुती गृह रिफर भएको महिलालाई अस्पतालको गेटमा छोडेर फर्कियो । सुत्केरी हुन नसकेकी महिला टेकू अस्पतालमा ?नमिल्दो कुरा भयो, तर त्यहाँ उनीहरुको कुनै दोष थिएन, जो पहिलो पटक काठमाडौं आएका थिए, जसलाई थाहा थिएन कुन अस्पताल कहाँ छ र कुन अस्पतालमा के उपचार गराइन्छ । त्यहाँ पूराकापूरा दोष एम्बुलेन्स चालकको छ, जो सही अस्पताल नपु¥याई फर्कियो, छिटो काठमाडौं पु¥याउनु भनेको विरामी ८ घण्टापछि अस्पताल आइपुगेको थियो, त्यही पनि पुग्नु पर्ने अस्पतालमा पुगेको थिइन । अस्पताल बाहिर सडकमा आएर ट्याक्सी खोजेर थापाथली पु¥याउन लगाइयो । ती गर्भवतीको अवस्था के भयो होला ?
२०७४ साल असारको महिनाको तेस्रो दिन । अस्पतालको पहिलो दिन
तपाँईको बच्चा एकदमै क्रिटिकल छ, जतिखेर जे पनि हुन सक्छ । हामीले कोशिस गरिरहेका छौं । बच्चा कामीरहेको छ, सिटी स्क्यान गर्न सकिएको छैन । सिटी गर्न पाए समस्या के हो भन्ने थाहा हुन सक्थ्यो ।
हामीले सिटी स्क्यान गर्यौं । रिपोर्ट आउन समय लाग्छ । साँझ ५ बजेसम्म आउँछ कि । घडि हेरको विहानको ११ मात्रै बजेको छ । क्रिटिकल विरामीको रिपोर्ट आउन, एक दिन ? साँझ पनि रिपोर्ट आएन । भोलिपल्ट रिपोर्ट आयो ।
रिपोर्टसँगै डाक्टरको दोधारे कुरा आयो, टाउकोमा जमेको रगत हो कि पानी क्लियर भएन । तत्काल अप्रेशन गरौं ।
अप्रेशन गर्दा बच्चा बाँच्छ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन । जे पनि हुन सक्छ । यस्तै यस्तै कुरा आइरह्यो ।
अस्पतालको नाम पढेको थिएँ, पहिले नै । ‘अन्र्तराष्ट्रिय मैत्री बाल अस्पताल’ शब्द शब्द केलाएँ । ‘अन्र्तराष्ट्रिय मैत्री’ के होला अर्थ ? आफैंले नाम सच्याएँ, ‘बालमैत्री अन्र्तराष्ट्रिय अस्पताल’ यो चाहिं सही र सुहाएको जस्तो लाग्यो । अन्र्तराष्ट्रिय मैत्री अस्पतालमा हामी गाउँले, हुँदा खानेहरुले कसरी उपचार गराउने ? प्रश्न उठिरहेको थियो । अस्पताल बाल मैत्री हुनु पर्ने, अन्र्तराष्ट्रिय मैत्री किन भयो, कुनै बेला यसका सञ्चालकहरुसँग कुरा गरौंला ।
पाठकहरुलाई लाग्दो हो, पैसा छैन भने किन गएको त प्राइभेट अस्पताल ?विवसता, बाध्यता, बिकल्पबिहिनताले नचाहँदा नचाहँदै पनि पुर्याउँछ नि कहिले काहिं ? उसै त सन्तानको मायाको सामू सबैकुरा थोक फिका हुन्छ । त्यहाँमाथि बिरामी सन्तानको उपचारको लागि हिंडेको अभिभावक !
सरकारी अस्पताल पुग्नेबित्तिकै हामी कहाँ बेड छैन, तुरुन्त आईसियु, एनआईसियु, पिआईसियु भएको अस्पतालमा लैजानुस । तपाँईको विरामी एकदमै क्रिटिकल छ भनेपछि गर्ने के ?अघिल्लो दिन कान्ति बाल अस्पताल पुगेपछि त्यही भयो । हामीले गर्ने जत्ति गर्यौं, पिआईसियु भएको अस्पताल लैजानुहोस, हामीले पिआइसियु भएको अस्पतालको नम्बरहरु टाँसिदिएका छौं । फोन गर्नुहोला, जूनमा बेड छ, जुन तपाँईहरुलाई उपयुक्त लाग्छ । त्यहीं लग्नु होला ।
कान्तिसंगै जोडिएको शिक्षण अस्पतालमा फोन गरें, पहिले । त्यहाँ पनि बेड खालि रहेनछ । संगै गएका साथी, अन्र्तराष्ट्रिय मैत्री बाल अस्पताल पुगेर आए, बेड खालि भएको सूचना लिएर । हामीहरु निरन्तर फोन गरिरहेका थियौं । त्यो बीचमा अर्को डाक्टर आएर बिरामी छिटो पिआईसियु भएको अस्पतालमा लैजान आग्रह गरिरहेका रहेछन ।
शिशुले मुखबाट फिज नै निकाल्न थालेको थियो । बच्चाको आमा यसै पनि आत्तिरहेको, डाक्टरले दबाब दिइरहेपछि त्यसको मात्रा निकै बढ्यो ।
ड्युटीमा रहेका डाक्टरहरुले भने यहाँ बेड खालि भएपछि तपाँईहरुलाई खबर गर्छौं, भोलि नै खालि हुन पनि सक्छ ।
भोलिपल्ट कान्ति पुग्दा ड्युटीमा रहेकाहरुको बोली फेरियो । तपाँईहरु बाहिर गइसक्नु भएको छ । तपाँइहरु हाम्रो प्राथमिकतामा पर्नु हुन्न । यहीं इमर्जेन्सिमा भएका वा भर्ना भएकाहरु प्राथमिकतामा पर्ने हो । यहाँ एक मात्रै हैन, अनेकौं प्रश्नहरु जन्मिन्छन । सरकारी अस्पतालन लगानी, सेवा, सुविधा र पूर्वाधारका हिसाबले निजी भन्दा बलिया छन । बेडका हिसाबले पनि अगाडि नै छन । तर जहिले पनि बेड खाली छैन भनिन्छ । उपचारका लागि अस्पताल जाँदा बेड पाइन्न । डाक्टर भेटिन्नन् । अस्पताल पुग्ने बित्तिकै घुमाउरो वा सिधै निजी अस्पताल लैजानको लागि बाध्य वा विवस पारिन्छन ।
त्यो बाल अस्पताल भनेपछि कान्ति मात्रै मनका किन आयो ? शुरुमै शिक्षण अस्पतालको बालविभागमा किन लगिएन भन्ने मनमा अहिले पनि लागि रहन्छ । तर निकै ढिलो भइसकेको थियो, जहाँ लगे पनि नतिजा अप्रिय नै आउनेवाला थियो भनेर चित्त बुझाइन्छ । अनि अहिले पनि मनमा प्रश्न उठिरहन्छ सन्तानवियोग सहन सक्ने आमाबाको कति विशाल छाति होला ।